​यस्तो छ ‘बाबु कान्छा’को गित (भिडियो)
इटहरी । शोभित बस्नेतद्वारा निर्देशित बहुप्रतिक्षीत चलचित्र ‘बाबु कान्छा’ले आफ्नोे ‘चन्द्रमा झै राम्री’बोलको गीत सार्वजनिक गरेको छ । ‘कर्णविर’ समावेश यस गित रिमिक्स भर्सनमा चलचित्रमा समावेश गरिएको छ । राजधानीमा शुक्रबार एक कार्यक्रमका बिच चलचित्र निर्माण टिले गित सार्वजनिक गरेको हो ।
बुद्ध लामा बने नेपाल आइडल, निशान कतिले पछि परे ?
काठमाडौं । नेपालको पहिलो नेपाल आइडल पोखराका बुद्ध लामा बनेका छन् । कतारको दोहास्थित एसियन टाउन एम्पिथिएटर, ग्रान्ड मल, सनायामा शुक्रबार राति भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा निशान भट्टराई र प्रताप दासलाई उछिन्दै पोखरा नयाँबजारका बुद्ध पहिलो नेपाल आइडलको उपाधि चुम्न सफल भएका हुन् ।
​गायक सञ्जिव सिंहको एकल साँझ इटहरीमा
इटहरी । गायक संजिव सिंहको एकल साँझ हुने भएको छ । नजिकिंँदै गरेको दँशै र तिहारको अवसरमा एकल साँझ आयोजना गर्न लागिएको हो । हाटखोला युवा क्लब इटहरी र एसडि फुटसलको संयुक्त आयोजनामा एकल साँझ हुन लागेको हो।
असोज १२ गते अष्टमीको....
​‘जोनी जेन्टलम्यान’ लाई पुर्वका दर्शकको साथ
इटहरी । गत भाद्र ३० गते देखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘जोनी जेन्टलम्यान’लाई दर्शकले रुचाएका छन् । चलचित्र प्रदर्शन भएको पाँच दिनसम्म पनि देशका विभिन्न ठाउँका हलमा दर्शकहरुको उत्तिकै मात्रामा चाप रहेको छ ।
माया प्रेमको कथामा आधारित चलचित्र हेर्नका लागि पुर्वको अधिकांश....
​किन गरिन् गायिका मिलन अमात्यले यस्तो आग्रह ?
काठमाडौं । गायिका मिलन अमात्यको एकाएक श्रीमान्सँगको डिभोर्सको विषय चर्चामा आउन थालेपछि उनले यस बारेमा समाचार नलेखिदिन आग्रह गरेकी छिन् ।
उनले आफ्नो व्यक्तिगत जिवनको विषयमा जथाभावी नलेखिदिन आफ्नो फेसबुक मार्फ मिडियालाई आग्रह गरेकी हुन् । अमात्यले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफ्नो बारेमा अनावश्यक विषयहरु....
​आर.के स्टुडियोमा आगलागी, सुपर डान्स सिजन–२ को सेट जल्यो
मुम्बई । भारतको मुम्बईमा रहेको आर.के स्टुडियोमा शनिबार आगलागी भएको छ । आगलागीका कारण टेलिभिजन रियालिटी शो सुपर डान्स सिजन २ को सेट समेत जलेर नष्ट भएको छ ।
आगो नियन्त्रण गर्न ६ वटा दमकल तथा पाँचवटा ट्यांकर प्रयोग गरिएको बताइएको छ ।
​बेलायती संसदमा सलमान खान अवार्डले सम्मानित
लण्डन । भारतका चर्चित नायक सलमान खान बेलायती संसदमा सम्मानित भएका छन् । उनी ‘ग्लोबल डायभर्सिटी अवार्ड–२०१७’ बाट सम्मानित भएका हुन् ।
उनलाई अभिनेता, निर्माता, समाजसेवी, गायकका रूपमा भारतीय चलचित्र तथा समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको भन्दै सम्मान गरिएको बताइएको छ ।
​सुनिल ग्रोबरको नयाँ शो दर्शकमाझ आउँदै
‘द कपिल शर्मा शो’ छाडेर गएका कमेडीयन डा.मशुहर गुलाटी अर्थात सुनील ग्रोबर नयाँ टेलिभिजन शोका साथ दर्शकहरुमाझ आउने भएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले अहिले गर्दै आएको ’द ड्रामा कम्पनी’ लाई विस्थापित गरेर नयाँ टेलिभजन कार्यक्रम ल्याउन भएका हुन् ।
क्याप्टेन हस्तबहादुर थापाका चार पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौ । नेपाली संगीतको परिदृश्य हेर्दा लाग्छ यो एउटा पफर्मिङ आर्ट मात्र हो । भन्ने नै हो भने नेपाली संगीत र संगीतकर्मीको ज्ञान, सिप र धारणाको विकासकालागि कुनै उल्लेखनीय काम भएको नै छैन । संगीतकर्मी स्वयम् आफ्ना बलबुताले सीप आर्जन गर्दैछन् ।
​‘छक्का पञ्जा’ राम्रो कि ‘छक्का पञ्जा २’ ?
इटहरी । छक्का पञ्जा २, यसअघिको फिल्म छक्का पञ्जाजस्तो नभएको निर्माता दीपकराज गिरीले बताएका छन् । सुनसरीको इटहरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्माता गिरीले यस्तो बताएका हुन् ।
पहिलो फिल्म मानिसको दिमागमा छाप परेकोले दोस्रो फिल्मले त्यो छापलाई जित्न गाह्रो हुने समेत बताएका छन्....